မနက်ဖြန် ကျမယ့် မွေးနေ့ — MYSTERY ZILLION
မနက်ဖြန် ကျမယ့် မွေးနေ့
ည 12 နာရီကျ၇င် သူများ ဦးသွားမှာဆိုးလို့ ဒီကနေ့ထဲက တင်လိုက်တာ
မနက်ဖြန်ကျရင် အော်ဖော်ပြပါ လူများရဲ့ ပျော်ရွင်စရာမွေးနေ့လေးတွေဖြစ်ပါတယ်
3. မော်မော် ညလေး (22) တို့ဖြစ်ပါတယ်
ကဲ အထက် က အစ်ကိုတော်သုံးယောက် ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်
ကိုယ့် ကောင်မလေးများနှင် ့အဆင်ပြေပြီး ဘုရားကို အတူတူ တက်နိုင်ပါစေဗျား
ကဲမွေးနေ့ရှင် သုံးယောက်တည်း က ဘယ်သူကျွေးမှာလဲ
ဒီ Thread ကိုဖွင့်တာကျွန်တော်နော်..ဟွန့်
(တော်သေးတယ် မင်မင် စေတန် ကြီး လက်မဦးသွားတာ)
Happy birthday to all ပါခင်ဗျာ ....
မွေးနေ့ရှင်မဟုတ်တဲ့သူတွေက Thread ဖွင့်ပေးလို့ရရင် ... မွေးနေ့ရှင်တွေလဲ ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခွင့်ရှိမှာပေါ့နော် ...
Alexander မွေးနေ့ ကျမှ Birthday Thread တစ်ခုဖွင့်ဦးမယ် ... :39:
happy birthday to u all / that called pre-birthday :P
သုံးယောက်လုံး Happy Birthday ပါ ခင်ဗျာ ... :5:
ဒီတခါတော့ Istein ရဲ့ အချစ်တုံးကြီး (သူ့မှာ အမရှိတယ်ဆိုလို့):D ကိုညလေးရဲ့ မွေးနေ့ဆိုတော့ တမူထူးခြားစွာ ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။:)
ကိုညလေး၊ ကို Wavelife နဲ့ ကို Zaytoe တို့ ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့များဖြစ်ကြပါစေလို့ ကျနော် မောင်အိုင်စတိုင်းမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည် ခင်ဗျာ။ ကိုရီးယားနဲ့ ဂျပန်က ကောင်မလေးတွေ နဲ့ အဆင်ပြေပါစေ (ကျနော်နဲ့:P)။ တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ။ (ကိုယ့်ဟာကိုယ်)
လက်ဦးတာမဟုတ်ဘူး... ၁၂ ကျော်တာနဲ့ auto လုပ်ထားတာ။ မွေးနေ့ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကို Happy Birthday လုပ်ထားတာ။ ဟဲဟဲ.... Happy Birthday!!!!!!!!!!!!!!!!
အေး ပေါ့လေ သူ က မင်မင်ကြီးပဲလုပ်ပေါ့ ဗျား
အော် ဒါနဲ့ အမ်ဇက် က အမျိုးတွေတော်တော်များလှချည်လား
ကိုအို်င်းနဲ့ ကိုနေ့လေး(မနက်ဖြန်လက်ဖက်ရည်တိုက်မယ့်သူ) ကအမျိုးတွေ
ကျွန်တော်နဲ့............က.........................မပြောတော့ပါဘူး တော်ကြာ Block လုပ်လိုက်ဦးမယ်(အခုတော့ စကားပြန်မပြောတော့ဘူးဗျ)
happy birthday to u all / that called pre-birthday
ကို1.wavelife ၊ကို zaytoe ၊ကိုညလေး တို့ မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဒါကတော့ ကျနော်ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပါ။ ကျနော်က ဆင်းရဲပါတယ် ခင်ဗျာ။ သုံးယောက်ပေါင်း တခုပဲ ပေးနိုင်ပါတယ်။:D
အားလုံးပဲ.............Happy Birthday ပါဗျာ...
ံHappy Birthday To ညမီးအိမ် wavelife နဲ့ zaytoe..
အော် မွေးနေ့ ရှင်က 12 နာရီထိုးတာတောင်မထသေးဘူးဗျ........
ရှည်ပါစေ ... အသက်
ထွက်ပါစေ ... အရပ်
ကုန်ပါစေ ... အမုန်း
ပွားပါစေ ... အချစ်
ဂိပါစေ ... ရန်သူ
တိုးပါစေ ... ရည်းစား
ရှုးတိုးတိုး နင်လုပ်မှအကုန်သိကုန်ပြီ ဟီးဟီး :d
ကိုပီစီကြီး နှစ်တွဲဆီခွဲပြီး ဗြောင်းပြန် ဖတ်လို့ရမလား။:d
မိုက်တယ်ကွာ ကဗျာဆရာတွေက............လန်ထွက်နေတာပဲ အဲဟုတ်ပေါင် အကြည်တော်အသုံးအနှုန်း မှည့်ထနေတာပဲ
အိုင်းအိုင်းလေးက အနော့် ကိုတော်တော်ချစ်ပုံရတယ် :d အသက် ထွက်ပါစေ တဲ့
မဟုတ်ရပါဘူး။ နာ့အကိုရယ်။ ကို ပီစီကြီး တွဲထားတာ ရီချင်လွန်းလို့။:d
happy birthday ပါဗျာ..... အကိုသုံးယောက် မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ .... မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပါ ...:103: :103:
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေဗျာ ...
ဆုတောင်းတာကတော့ ကိုပီဇီ အတိုင်းပဲ
ဟေ့ဟေ့ ကျွန်တော် မပါဘူးနော်ဗျာ .... :d
ကို ညမီးအိမ် ညဘက်သူများအိပ်ချိန် မှာ တစ်ယောက်ထဲထထလုပ်နေတဲ့ အကျိုးကြောင့် ဂိပါစေဗျာ။
(Geek) ကိုပြောတာ။ ကွန်ပြူတာ ဂိဖြစ်ပါစေလို့နော်။
(geek) ကိုပြောတာ။ ကွန်ပြူတာ ဂိဖြစ်ပါစေလို့နော်။ :d
အခုမလုပ်တော့ဘူးဗျ အခုနေ့မီးအိမ် ဖြစ်သွားပြီ
(နေပူကြီးထဲမှာ မီးအိမ်လိုက်ထွန်းနေတယ်) ဟီး သူမရှိလို့ပြောတာ သူပြန်လာရင်တော့ပြောဦးမယ်